Juventus & Barcelona Oo Saxiixyada Samuel Umtiti & Matthijs de Ligt Ka Wada Shaqayn Kara Iyo Man United Oo Umtiti Laga Dul Qaadayo. - GOOL24.NET
Juventus & Barcelona Oo Saxiixyada Samuel Umtiti & Matthijs de Ligt Ka Wada Shaqayn Kara Iyo Man United Oo Umtiti Laga Dul Qaadayo.
Kooxaha Juventus iyo Barcelona ayaa u muuqda kuwo dan isku mid ah ku gaadhi kara saxiixyada difaacyada dhex ee Samuel Umtiti iyo Matthijs de Ligt iyada oo koox kastaaba heli karta mid ka mid ah labadan difaac iyaga oo iskaashanaya. Barcelona ayaa ugu cad cad in ay ku guulaysato saxiixa difaaca kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt laakiin Juventus lafteeda ayaa arintan ka faa’iidaysan karta.
Kadib in Samuel Umtiti uu xili ciyaareedkan dhibaato dhaawac oo waqti badan qaadatay uu kooxdiisa Barcelona kaga maqnaa waxay maamulka Camp Nou u muuqdaan in ay u furan yihiin in difaaca reer France uu kooxdooda ka bixi karo, waxaana xiisaynaya kooxo badan oo ay Man United iyo Juventus ka mid yihiin.
Laakiin wargayska AS ee dalka Spain ka soo baxa ayaa shaaciyay in Juventus ay Barcelona ka caawin karto saxiixa Matthijs de Ligt kadib markii ay quus ka joogsatay in ay la tartami karto balse taas badalkeeda ay Barca ka doonayso saxiixa Samuel Umtiti oo ay Barca lafteedu lacagtiisa u adeegsan karto saxiixa Matthijs de Ligt.
Juventus ayaa todobaadkan markhaati ka ahayd markii uu difaaca kooxdeeda ee Andrea Barzagli uu ku dhawaaqay in uu ciyaaraha ka fadhiisanayo dhamaadka xili ciyaareedkan, waxayna u baahan yihiin difaac ay kooxdooda ku soo xoojiyaan.
Umtiti oo aan xili ciyaareedkan lahayn saamayntii uu Barcelona ku soo yeeshay ayay Juventus doonaysaa in ay kala soo wareegto Barcelona maadaama oo ay Barca haddaba qarka u saaran tahay in ay De Ligt ka dhigto saxiixa kale ee ay Ajax kala soo wareegayso.
Wariyaha Talyaaniga ah ee Fabio Paratici ayaa sheegay in Barcelona ay dhegaysan doonto dalabka ay Juventus ku doonayso saxiixa Umtiti maadaama oo ay haystaan difaacyo dhexe oo iskugu jira kuwo khibrad leh iyo kuwo da’yar ah oo ka kooban Gerard Piqué, Clément Lenglet, Thomas Vermaelen iyo Jean-Clair Todibo taas oo waliba ay suurtogal tahay in ay De Ligt ku soo xoojiso.
Barcelona waxay lacag 75 milyan yuro ah ka soo bixisay Frenkie De Jong oo ay De Ligt ka wada tirsan yihiin kooxda Ajax, waxaana jira xidhiidh cajiib ah oo u u dhexeeya maamulada kooxaha Barca iyo Ajax, laakiin si ay Barca lacag kale oo badan ugu bixiso De Ligt waxay dhegaysan doontaa dalabka ay Juventus ku doonayso saxiixa Umtiti.
Man United ayaa markii hore ahayd kooxda waqtiga dheer doonaysay saxiixa Samuel Umtiti laakiin hadda Juventus ayaa ah kooxda ugu cad cad ee ay Barcelona ka heli karta saxiixa Umtiti taas oo ay Barca lafteedu lacagtiisa ku maal galin doonto saxiixa De Ligt.